I-2022 Most Powerful Passports Index iveza 'i-travel apartheid'
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izindaba Ezintsha » I-2022 Most Powerful Passports Index iveza 'i-travel apartheid'
Izindaba Ezintsha zaseYurophu • Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Ukuhamba Ngebhizinisi • Izindaba zikaHulumeni • Health News • Industry Hospitality Industry • Human Rights • Japan Izindaba Ezintsha • Izindaba • Abantu • Unomthwalo wemfanelo • Ukuphepha • I-Singapore Breaking News • ISouth Korea Izindaba Ezintsha • Ezokuvakasha • Izindaba Zocingo Lokuhamba • ezithrendayo Manje • I-USA Izindaba Ezintsha
Inkomba yomhlaba ka-2022 'yamapasi anamandla' iveza 'i-travel apartheid'
Ngokwalo mbiko, izinzuzo zokuhamba ezibonwa izakhamuzi zamazwe aphezulu anemali ephakathi nephezulu “zifike ngezindleko” zamazwe ahola kancane kanye nalawo abhekwa “njengasengozini enkulu” ngokwezokuphepha nokunye okucatshangelwayo.
Inkampani yase-UK i-Henley & Partners ikhiphe inkomba yayo yakamuva yezinga lamaphasiphothi emhlabeni jikelele namuhla - ucwaningo lokuhamba komhlaba oluthole ukuthi izakhamizi zase- Japan futhi iSingapore iphethe amaphasipoti alungele ukuhamba emhlabeni wonke ngo-2022.
Ngaphandle kokubalwa kwemikhawulo ye-COVID-19, amazinga okuqala ka-2022 asho lokho Japanese futhi abantu baseSingapore ngokusobala bangafinyelela emazweni ayi-192 ngaphandle kwe-visa.
Elinye izwe lase-Asia, INingizimu Korea, ibambene neGermany endaweni yesibili ohlwini lwamazwe angu-199. Abanye kwabayishumi abaphezulu baphethwe amazwe e-EU, i-UK ne-US zikleliswe endaweni yesithupha, bese kuthi i-Australia, Canada, kanye namazwe aseMpumalanga Yurophu akhiphe abadlali abasezingeni eliphezulu.
Ngakolunye uhlangothi, izakhamizi zase-Afghan zingahamba mahhala ukuya ezindaweni ezingama-26 kuphela.
Izinga lixwayise ngemikhawulo ye-COVID-19 ebhebhethekisa 'ubandlululo lokuhamba' phakathi kwamazwe acebile nampofu, kanye negebe elikhulayo lenkululeko yokuhamba ejatshulelwa amazwe acebile uma kuqhathaniswa nalawo anikezwa abampofu.
Lo mbiko uphinde wathi lokhu "kungalingani" ekuhambeni komhlaba kubhebhethekiswe yizithiyo zokuhamba phakathi nalolu bhubhane, Unobhala-Jikelele we-UN u-Antonio Guterres muva nje ifanise imingcele ebekwe amazwe amaningi ase-Afrika “nokuhamba ngobandlululo.”
"Izidingo ezibizayo ezihambisana nokuhambela amazwe ngamazwe zenza kube nokungalingani kanye nokucwasa," kusho u-Mehari Taddele Maru, uprofesa wetoho e-Migration Policy Center e-European University Institute, wengeza ngokuthi amazwe athuthukile "awazange ahlanganyele njalo" ngokuzimisela komhlaba osathuthuka. ukuphendula “ezimweni ezishintshayo.”
"I-COVID-19 kanye nokusebenzisana kwayo nokungazinzi nokungalingani kuye kwagqamisa futhi kwakhulisa umehluko oshaqisayo wokuhamba kwamazwe ngamazwe phakathi kwamazwe acebile athuthukile nozakwabo abampofu kakhulu," kwengeza uMehari.
Ngaleso sikhathi, lo mbiko ubikezela okunye ukungaqiniseki ngohambo nokuhamba unyaka wonke, kucatshangelwa ukwanda kwe-Omicron ye-coronavirus. Ukuvela "kwalolu hlobo olusha oluqinile" kwaba "ukwehluleka okukhulu kwezepolitiki" engxenyeni ye-US, UK, kanye ne-EU ngokunganikezi ngemali engcono kanye nempahla yokugoma eningizimu ye-Afrika, ngokusho kokuphawula kukaprofesa wase-Columbia University uMisha Glenny. ehambisana nombiko.